युगसम्बाद साप्ताहिक - चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं
Thursday, 12.05.2019, 07:53pm (GMT+5.5) Home Contact
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं
Wednesday, 07.25.2018, 12:27pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा केही फेरबदल गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि देशको सडक अहिले डा. गोविन्द केसीमय भएको छ । उहाँ २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँ अध्यादेश अनुसार विधेयक आउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा डा. केसीकाा मागका विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । संसदलाई विश्वास गर्नुपर्ने वा संसदलाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने टिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।
नेपालका सांसदहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नसक्ने हैसियतका नभएको पटकपटक देखिएको छ । दलीय स्वार्थ अनुसार धारणा बनाएर समर्थन र बिरोध गर्नेहरुबाट विवेकसम्मत निर्णय हुन्छ भन्ने पत्याउनेको संख्या कम छ । यस्तोमा सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै छ ।
अहिलेको गतिविधि लोकतान्त्रिक बिधि विपरीत भएको भन्दै जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
संक्रमणकालको नाममा विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरूपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने धारणा रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरूका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् ।
डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उहाँको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
नेपालमा नै गुणस्तरीय मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीले सुलभ दरमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्रमै उठाएको र समावेश भएको विषय हो । सरकारले नै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । आमजनताको चाहना पनि त्यही हो । तर विगतमा जस्तै अनशन बसेकै भरमा वा संसद्भन्दा बाहिरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको मागबमोजिम नै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा नियम निलम्बन नगरी सामान्य प्रक्रियाबाटै ल्यायो । तर काँग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेर संसद् नियमावलीविपरीत गतिविधि गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा खोजिने निकास ग्राह्य नहुने बताउनुहुन्छ ।
“जननिर्वाचित संस्थालाई निरीह बनाउने, जनादेशभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने विषय आफूहरूलाई मान्य छैन । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको विषय हो । हामी संसद्मा नै सबै विषयमा छलफल होस् र समाधान निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छौँ”, उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो ।
विगतमा नेपाली काँग्रेस नै सरकारमा रहँदा धेरै पटक डा केसी अनशनमा बस्नुभएको छ । तर टालटुले तवरले समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरियो । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने प्रयास वास्तविक रूपमा हुन सकेन भन्नुहुन्छ विश्लेषक भीम भूर्तेल ।
जनताको थलोभन्दा बाहिर भाषण गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले संघीय संसद्बाटै समस्याको समाधान खोज्न उहाँको सुझाव छ । अर्कोतिर सरकारले सडकको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा पनि बलवती छ । डा. केसीको पक्षमा सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ ।
डा. केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा व्यापक प्रदर्शन भयो । विभिन्न पेशाकर्मी, चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याई अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न आग्रह गरे ।
डा केसी समर्थकहरुद्वारा आयोजित दबाबमूलक प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले डा केसीले उठाएका विषय सम्पूर्ण नेपालीका भएकाले छिटोभन्दा छिटो उहाँको माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले सरकारले जतिसक्दो छिटो माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै आइतबार सामूहिक अनशन बस्ने जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले एक हप्ताका लागि संसद नै स्थगित गरेको छ । यसबीचमा विधेयकमाा सहमति जुटाउने प्रयास भने भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ता पछि सरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै संसद्मा प्रस्तुत भएको दावा गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विधेयक आफ्नो सरकारको पालामा जारी भएको अध्यादेशको भावनाअनुरुप नभएको भन्दै संसद्मा पेश गर्नसमेत दिएको छैन । सदनको अर्काे बैठक यही साउन ११ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
सरकारका मन्त्रीहरु डा. केसीका मागका विषयमा एकमत छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले डा गोविन्द केसीको माग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा डा केसीको मागअनुरूप के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो । सीमासम्बन्धी देखिएका जटिलतालाई आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गरिने बताउँदै उहाँले सम्झौताको पुनरावलोकन पनि अपरिहार्य भइसकेको धारणा राख्नुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले सरकारी ठेक्का लिइ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले पार्टी एकीकरणको प्रत्याभूतिको कार्य अब स्थानीय तहमा पनि तीव्र गरिनेछ भन्नुभयो ।
उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ । मन्त्री पण्डितले संसदमा प्रस्तुत भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन नहुने भन्दै वार्ताबाट डा केसीको जायज माग समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेसम्म अनशनबाट मात्रै कुनै पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै डा केसीका मागबारे पनि वार्ता र सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । “संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक संशोधनमार्फत पारित हुनसक्छ, तर बीच बाटोबाटै फिर्ता लिने काम हामीबाट हुँदैन, यो सम्भव छैन”–उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा दर्ता भएका विधेयक संसद्बाट नै पास हुन्छ, फिर्ता हुदैन ।”
मन्त्री पण्डितले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारले निजी, सहकारी र सरकारीलाई लिएर अघि बढ्ने भन्दै आफूहरु कुनैपनि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘‘हामी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ, मेडिकल कलेजका शुल्क निर्धारण गराँै, मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेर निषेध गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन ।”